José Javier Abasolo. Ajụjụ ọnụ onye edemede nke Version original | Akwụkwọ ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 14/09/2021 12:00 | Ajụjụ ọnụ, Ndị edemede, Akwụkwọ
Foto: José Javier Abasolo. Facebook profaịlụ.
Jose Javier Abasolo (Bilbao, 1957) nwere akwụkwọ akụkọ ọhụrụ n'ahịa, Originaldị nke mbụ, ebe ọ na -alaghachi n'omume ya Mikel Goikoetxea na ọzọ ọhụrụ ikpe na ụwa nke sinima na ndabere. Ọ bụ ihe kachasị ọhụrụ na nchịkọta ezigbo aha ụdị ojii n'azụ ya dịka Ìhè Nwụrụ Anwụ, Ọcha Whitechapel ma ọ bụ ili dị na Jerusalem, n'etiti ọtụtụ. Enwere m ekele maka oge na obiọma gị n'inye m nke a Ajụjụ ọnụ.
José Javier Abasolo - Ajụjụ ọnụ
AKITKỌ AKITKỌ: Originaldị nke mbụ ọ bụ akwụkwọ akụkọ ọhụrụ gị. Kedu ihe ị na -agwa anyị gbasara ya na kedu ka Mikel Goikoetxea si eme dị ka onye nyocha nzuzo?
JOSÉ JAVIER ABASOLO: Akwụkwọ akụkọ na -amalite mgbe Goiko bụ ụlọ ọrụ na -emepụta ihe goro ya ịbụ onye ndụmọdụ nke a ihe nkiri nke a na -ese na ụfọdụ mpụ ndị mere na Bilbao Afọ iri abụọ gara aga, ihe ndị nta akụkọ kpọrọ "mpụ nke obe na -agba akụ."
Na ụkpụrụ, ọ bụ na -ala azụ ịnakwere onyinye a, maka na ọ bụ ya naanị ikpe nke enweghị ike idozi mgbe ọ bụ Ertzaina, mana n'aka nke ọzọ ọ na -eche na ọ nwere ike ịbụ a ohere ịmalitegharị kpuchie nyocha banyere ogbugbu ụfọdụ na -aga n'ihu na -enye ya nsogbu. Agbanyeghị na mgbe ọ matara na myirịta dị n'etiti ihe mere na ihe nkiri ahụ (nke edobere Bilbao na mpaghara furu efu na Alabama, USA) dị ezigbo anya, ọ gaghị ezobe iwe ya.
Dịka onye nyocha Goiko na -eme nke ọma, ebe ọ na -enwe mmasị igwu egwu site n'iwu nke aka ya na enweghị oke ịdọ aka na ntị, mana mgbe ụfọdụ ọ na -efufu akụrụngwa nke ịrụ ọrụ otu nwere ike inye ya yana ọtụtụ ụzọ karịa ka ọ nwere naanị ya.
JJA: Echetara m otu nchịkọta nke megharịrị akwụkwọ ọgụgụ mara mma maka ụmụaka, n'ime ya enwere m ike ịgụ El Lazarillo de Tormes, El Cantar de Mío Cid, Don Quixote na Corazónnke Edmundo de Amicis dere. Mgbe m chọpụtara mgbe m mere okenye na nke ikpeazụ a so na akwụkwọ Index of Akwụkwọ A machibidoro iwu nke Church, enweghị m ike ikwere ya.
Banyere ihe mbụ m dere - ma ọ bụ, kama nke ahụ, m nwara ide ya, echere m na ọ bụ nwara n'akwụkwọ akụkọ picaresque gafere na narị afọ nke XNUMX (Kedu ihe anyị ga -eme, abụ m nke narị afọ gara aga), mana anaghị m edebe ya. Ọ dabara nke ọma.
JJA: O siri ike ịza, n'ihi na ọ nwekwara ike gbanwee dabere n'ụbọchị ma ọ bụ ọnọdụ m. Mana dị ka onye nwere oke mmasị na ụdị ojii, m na -agụgharị ndị ukwu dịka Raymond Chandler ma ọ bụ Dashiell Hammett. Ama m na ọ dị ka nnukwu isiokwu, mana echere m na n'okwu a, ọ bụ isiokwu siri ezigbo ntọala.
N'èzí ụdị ojii, Pio Baroja. Ọ tọrọ m ụtọ nke ukwuu Ụlọ na Jardiel Poncela.
JJA: Dịka m kwuru mgbe m na -aza ajụjụ gara aga, ọ na -esi ike ịza, n'ihi na dabere na ihe m na -agụ ma ọ bụ ọnọdụ m, enwere m ike ịgbanwe site n'otu ụbọchị ruo ụbọchị ọzọ, mana ikekwe ọ gaara amasị m izute onye akụkọ akụkọ Pío Baroja. , Zalacaín onye njem ahụ.
Banyere ụdị mkpụrụedemede m gaara achọ imepụta, Ekpebiri m maka ndị ahụ m meworo. Ọ bụghị n'ihi na ha ka mma ma ọ bụ nwee mmasị karịa ndị ọzọ, mana n'ihi na ha bụ akụkụ m.
JJA: Ọ dịghị onye ọ bụla, ọ bụ ezie na ebe ọ bụ na ha gwara m na inwe manias mgbe ị na -ede ụda na -ada ụda "akwụkwọ ọgụgụ", m na -ekwukarị nke ahụ Enwere m mania nke enweghị manias.
JJA: Tupu m dee ọtụtụ n'ime ehihie na abalị, mana kemgbe m lara ezumike nka Enweghị m mmasị, oge obula ọ nwere ike ịdị mma. N'ezie, ana m agbalị ịnweta oge iji mee ya kwa ụbọchị. Ma ebe ọ bụ na achọghị m ikewapụ onwe m iche, ma ọ bụ edobebeghị m ọfịs n'ụlọ m maka naanị m, M na -eburukarị laptọọpụ m abanye n'ime ụlọ. Mgbe ụmụ m dị obere, m na -ede ihe n'etiti mkpọtụ ha na -eme mgbe ha na -egwu egwu ma emegharị m ya na -enweghị nsogbu. Ugbu a ọ na -ewute m nke ukwuu n'oge a na -ede ihe.
JJA: Echeghị m na enwere ụdị dị mma ma ọ bụ nke ọjọọ, mana akwụkwọ akụkọ dị mma ma ọ bụ nke na -adịghị mma, n'agbanyeghị ụdị nke enwere ike ịkpọ ha, mana ebe ọ bụ na achọghị m ịta mmiri, ekwesịrị m ikweta na m nwere adịghị ike maka akụkọ sayensị (Ana m abụkarị Asimovian) na maka ya akụkọ ihe mere eme ụdịMana ọ bụghị maka onye na -ekwu maka nnukwu ndị eze na ndị ọchịagha, mana maka onye na -elekwasị anya na "ndị na -ata ahụhụ" nke akụkọ ntolite.
JJA: En Euskera Ana m agụgharị Greta, na Jason osoro, akwụkwọ akụkọ na -atọ ụtọ nke ukwuu nke m chere na asụgharịghị ya na Castilian, ọ dị nwute. Na n'ime Castilian Amalitela m ịgụ Abalị gbapụnke Thomas dere Chastain, nke m nwetara Black Black ikpeazụ na Gijón. Ọ bụ akụkọ sitere n'aka onye ode akwụkwọ nke m na -amaghị na edepụtara ya na nchịkọta Júcar na nchịkọta Black Label, nke na -ewepụta ntụkwasị obi na m.
Banyere ide ihe, ọ bụ ihe karịrị ide ihe na -edetu maka akwụkwọ akụkọ m chọrọ ịtọ na Bilbao, n'oge agha obodo, ụbọchị ole na ole tupu ndị agha Franco weghara obodo ahụ.
JJA: Eziokwu bụ na Amachaghị m nke ọma n'akụkụ ndị ahụ. Ruo ọtụtụ afọ, ebipụtala m n'ụlọ mbipụta akwụkwọ akụkọ abụọ nke Basque, ọkachasị na EREIN yana kwa na TXERTOA, n'agbanyeghị na n'ime nke a na -adị kwa oge. Site na mgbe ha diri m ma nọgide na -atụkwasị m obi, aga m eche na echiche dị mma.
Na ikwu okwu n'ozuzu, ọ dị ka a na -ebipụta ya nke ukwuu, nke nwere ihe dị mma nye m, n'agbanyeghị na enwere m mmetụta na nke ikpeazụ ọ bụghị onye ọ bụla kwenyere m. Na, na nkwanye ugwu niile, echere m na nke ahụ bụ ọnọdụ adịghị mma, n'ihi na ịdị mma na -esitekarị n'ọtụtụ.
JJA: Echere m na ọ bụ ihe siri ike dịka nke ụmụ amaala ndị ọzọ. Ọ dabara nke ọma, n'etiti ndị kacha dịrị m nso, enwebeghị nnukwu nsogbu n'ihi covid, mana nke a agwụbeghị ma anyị ga -aga n'ihu na -akpachapụ anya, ọ bụ ezie na ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ọ dị ka anyị na -amalite ịhapụ ọwara.
Ma ọ bụrụ na m debe ihe dị mma ide akụkọ, maka ugbu a, m ga -ahapụ ka ọ gafere, Enweghị m mmasị ide banyere ọrịa na -efe efe, n'agbanyeghị na ị maghị ihe ọdịnihu nwere ike ime, yabụ anaghị m achị ya kpamkpam.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » José Javier Abasolo. Ajụjụ ọnụ onye edemede nke Original Version